ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊တည်ဆဲဥပဒေ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းနှင့် ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ ၊သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီရေးတပ်လှန့်သံ - Yangon Nation News
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းနှင့် ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ ၊သို့မဟုတ်
ယနေ့မြန်မာနိုင်တွင် လက်ရှိကျင့်သုံးနေသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထုံးနှင့်ညီညွတ်သောတရားဝင်အစိုးရသည် သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ဦးဆောင်သည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး၊
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ရေးဆွဲပြဌာန်းထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ပြည်သူလူထုက ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော ဥပဒေပြုလွတ်တော်အသီးသီး၏ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသာလျှင်မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်ဥပဒေပြုအဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကာ၊ ၎င်းတို့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများသည်လည်း တည်ဆဲဥပဒေထုံးများအရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်မူဖြစ်ပါတယ်၊
တည်ဆဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထုံးကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကာ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အားအသုံးချ၍
နိုင်ငံတော်၏ အာဏာသုံးရပ်ကို လုယူထားသည့် စစ်ကောင်စီအဖွဲ့သည် တည်ဆဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥဒေထုံး၊တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်လည်းညီညွတ်မူမရှိပါပေ ၊
သို့ကြောင့် တရားဝင်အစိုးရအဖြစ် ဥပဒေအရ သတ်မှတ်၍မရပါ၊
ပြည်သူလူထုအား တည်ဆဲဥပဒေအရ ကိုယ်စားပြုမူသည် ရွေးချယ်ခံလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ထက်ဝက်ကျော်မက ထောက်ခံသဘောတူ ဆုံးဖြတ်တာဝန်ပေးခြင်းခံယူထားသည့် ” ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ” ” CRPH ” သည် တည်ဆဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ တည်ဆဲလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေထုံးများနှင့်ညီညွတ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဥပဒေအရ တရားဝင်အဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်၊
” CRPH ” ကခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်သော
ခေတ္တဒုတိယသမ္မတဦးဆောင်နေသည့်ခေတ္တပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများသည်လည်း တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်ညီသော ဥပဒေအရ တရားဝင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပါတယ်၊
ကုလသမဂ္ဂအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကြေညာစတမ်းပါ အပိုဒ်အချို့နှင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စများကိုအနည်းငယ်ချိတ်ဆက်တင်ပြပါရစေ ၊
အပိုဒ်ခွဲ (၁) လူတိုင်းတွင်မိမိနိုင်ငံ၏အုပ်ချုပ်ရေး၌ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်လိုက်သည့် ကိုယ်စားလှယ်များမှတဆင့်ဖြစ်စေ၊ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်၊
မြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊နိုင်ငံတော်၏အခြေခံမူများ၊ ပုဒ်မ(၃၈)(က) တွင်ထိုသဘောမျိုးဆောင်သောပြဌာန်းထားခြင်းရှိနေပါတယ်၊
အပိုဒ်ခွဲ(၃) ပြည်သူပြည်သားတို့၏ဆန္ဒသည် အုပ်ချုပ်မူအာဏာ၏ အခြေခံဖြစ်ရမည်၊
အဆိုပါဆန္ဒကို အချိန်ကာလပိုင်းခြားလျှက် စစ်မှန်သောရွေးကောက်ပွဲများဖြင့်ထင်ရှားစေရမည်၊
ပုဒ်မ(၄) နိုင်ငံတော်၏အချုပ်အခြာအာဏာသည် နိုင်ငံသားများထံမှဆင်းသက်ပြီး၊နိုင်ငံတော်တစ်ဝန်းလုံး၌တည်သည်၊
လွတ်လပ်၍တရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲဆိုသည်မှာ မိမိကြိုက်နှစ်သက်သူကို ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရရေးအတွက် ကိုယ်တိုင်လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပြဌာန်းခွင့်ရှိသည်၊
ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပြဌာန်းနိုင်ခွင့်ကို ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် နိုင်ငံတကာ စာချုပ်စာတမ်းများတွင်အတိအလင်းရေးသားပြဌာန်းထားသည်၊
ဆိုလိုချင်တာက (၂၀၂၀) အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမူနှင့် ပြည်သူပြည်သားများ၏ ဆန္ဒမဲပေးကြမူသည် ကုလသမဂ္ဂအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းပါအချက်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြင့်ညီသည့်အပြင် ၊
သို့သော်လည်း စစ်ဗိုလ်ချုပ်အုပ်စုမှ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် အကျိုးစီးပွားများ၊လူ့အခွင့်အရေး၊နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်း၏ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများကို မငဲ့ကွက်ပါဘဲ ၊ ၎င်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်တစ်ဦးချင်း၏ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် ဒီမိုကရေစီနည်းကျပြည်သူလူထုမှရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသောအစိုးရနှင့် ပြည်သူ့ကိုယ်စားပြု
ထောက်ခံဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ်ထားသော ဥပဒေပြုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံမှ ဥပဒေပြပိုင်ခွင့်များကို လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုအသုံးချ၍ လက်နက်အားကိုးကာ လုယူခဲ့မူကြောင့် နိုင်ငံအတွင်းတည်ငြိမ်မူများကိုပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်၊
ပြည်သူပြည်သားများကိုလည်း လက်နက်အားကိုးဖြင့် မတရားသတ်ဖြတ်၊ဖမ်းဆီးမူများသည်လည်း ပြည်သူပိုင်လမ်းမမှသည် မိမိပိုင်နေအိမ်ဥပစာအတွင်းသို့စီးနင်းဝင်ရောက်ပြီး၊
၎င်းတို့က နိုင်ငံတော်အာဏာကို လုယူပြီးမှအစပြုကာ ယနေ့အချိန်အထိ နေ့စဉ်လိုဖြစ်နေပါပြီ၊
လက်နက်မဲ့သာမန်ပြည်သူများသတ်ဖြတ်ခံနေရသည်မှာ ၎င်းတို့အာဏာလုယူပြီးချိန်မှ (၄၃) ရက်အတွင်း တစ်ရာ(၁၀၀) ကျော်မှ နှစ်ရာ(၂၀၀) အတွင်းရှိနေပါပြီ၊
တရားမဲ့ဖမ်းဆီးခံနေကြရသည်မှာလည်း၊နှစ်ထောင်(၂၀၀၀) ဝန်းကျင်ခန့်ရှိနေတာကို ကြားနေရပါတယ်၊
မိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မူနှင့်လုံခြုံမူသည်အလျဉ်းမရှိတော့ပေ၊
နိုင်ငံပေါင်း(၁၉၇) နိုင်ငံခန့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသိုက်အဝန်းအားလုံးကလည်း အလုံးစုံသိရှိ မြင်နေ ကြားနေကြပါပြီ၊
မိမိတို့ပြည်သူတွေက ဘာများအမှားတွေလုပ်ခဲ့လို့လဲ ?
မိမိတို့၏ ပိုင်ခွင့်ဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံနဲ့မိမိတို့ပြည်သူများရဲ့အနာဂတ်ကောင်းများပေါ်ထွန်းလာစေဖို့ မိမိတို့စိတ်ချ ယုံကြည်တဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့အဖွဲ့အစည်းပါတီကို ကျေကျေနပ်နပ် ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ထောက်ခံဆန္ဒမဲပေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုသည်ကို ကမ္ဘာကြီးက နားလည်ပေးကြပါ၊ စာနာပေးကြပါ၊ကူညီပေးကြပါ၊
မိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံကို “Globalization” ၏ကောင်းကျိုးများကို ခံစားခွင့်ပေးကြပါ ၊
ကမ္ဘာကြီးကို ယနေ့ဖြစ်ပျက် ခံစားနေရမူတစ်ခုကိုအသိပေးပါရစေ၊
မိမိတို့နိုင်ငံအတွင်းမှာ နေပြီး တရုတ်နိုင်ငံသံရုံးမှ မြန်မာစစ်ကောင်စီက ဥပဒေမဲ့ကျည်ဆံအစစ်ဖြင့်ပြစ်ခတ် သတ်ဖြတ်၊ဖမ်းဆီးနေခြင်းကို လျစ်လျူရှုကာ၊
၎င်းတို့နိုင်ငံ၏ပိုင်ဆိုင်သော ပြည်နယ်တစ်ခုလိုသဘောထား၍ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်မိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံသားပြည်သူများအား ဥပဒေချိုးဖောက်သူများဟုသုံးနူန်းပြီး၊
ပြင်းထန်စွာအရေးယူပေးရန်စစ်ကောင်စီသို့တိုက်တွန်း ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တစ်စောင်ကို မြန်မာပြည်သူများအပေါ် မောက်မောက်မာမာ ရေးသားထုတ်ပြန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်၊
အပိုဒ်(၃) လူတိုင်း၌ အသက်ရှင်ရန်လွတ်လပ်မူခွင့်နှင့် လုံခြုံစိတ်ချခွင့်ရှိသည် ၊
၎င်းဖွင့်ဆိုချက်ပါ ခံစားပိုင်ခွင့်က မိမိတို့မြန်မာပြည်သူတွေပါ ရယူခံစားပိုင်ခွင့်ရှိရမှာမဟုတ်ပေဘူးလား ?
လက်တွေ့ကျသည့် ကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်မူများကို စွမ်းဆောင်ပေးကြပါလို့ မြန်မာပြည်သူအပေါင်းမှ တောင်းဆိုနေကြသည်ကို ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အပါအဝင် ကမ္ဘာ့အသိုက်အဝန်းများအားလုံးက ကြားနေ
မြင်နေ သိသာနေကြပါပြီ ၊
ယခုဖြစ်နေသော မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးသည် ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် တပ်လှန့်သံပင်ဖြစ်ပါတယ် ၊
ရာဇသတ်ကြီး၊ အခန်း(၄) ပါဥပဒေပြဌာန်းချက်အချို့အားရေးသားတင်ပြရင်းဆောင်းပါးကိုအဆုံးသတ်ပါရစေ၊
ပုဒ်မ(၉၉) – ။ ။ ။ ………. ၊
ရှင်းလင်းချက်(၁) ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ဖြင့်သော ၊ သို့တည်းမဟုတ် ပြုရန်အားထုတ်သောသူသည် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဖြစ်သည်ဟု အပြုခံရသူက မသိလျှင် ၊ သိုတည်းမဟုတ်
” ယုံကြည်ရန်အကြောင်းမရှိလျှင် ” ၊
ထိုသူသည် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း၏ ပြုလုပ်မူကို ၊သို့တည်းမဟုတ် အားထုတ်မူကို တားဆီးရန် ကာကွယ် ခုခံပိုင်ခွင့်ရှိသည် ၊
ပုဒ်မ(၁၀၀) အောက်ဖော်ပြပါ ပြစ်မူတစ်ခုခုကို အန္တရာယ်ပြုသူက ကျူးလွန်ခဲ့လျှင် ၊ တဆက်တည်းဖြစ်သော အထက်ပုဒ်မတွင်ဖော်ပြသည့် ကန့်သတ်ချက်များကို အထောက်အထားပြုကာ ၊
ထိုအန္တရာယ်ပြုသူကို သေစေရန်သော်၎င်း၊ အခြားဘေးအန္တရာယ် တခုခုဖြစ်စေရန်သော်၎င်း ၊
မည်သူမဆို မိမိအလိုအလျောက်ပြု၍ လူ့ကိုယ်ကို ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်ရှိသည် ၊
ပဌမ ။ ။ မကာကွယ် မခုခံလျှင် သေဘေးသို့ရောက်စေခြင်းအတွက် စိုးရိမ်ဘွယ်ရာ ဖြစ်လောက်အောင် အကြောင်းရှိသည့် လက်ရောက်မူ ၊
ဒုတိယ ။ ။ မကာကွယ် မခုခံလျှင် အပြင်းအထန် နာကျင်စေခြင်းအတွက် စိုးရိမ်ဘွယ်ရာဖြစ်လောက်အောင် အကြောင်းရှိသည့် လက်ရောက်မူ ၊
သို့ပါသော အကြောင်းအချက် အခြေအနေများအား ထောက်ရှု သိမြင်၍ ဥပဒေနဲ့အညီ မိမိကိုယ်ကို၊ မိမိရပ်ရွာဒေသကိုကာကွယ်နိုင်ကြပါစေကြောင်းနှင့်
လက်နက်အားကိုး၍ လက်နက်မဲ့ပြည်သူများအား တရားမဲ့ ပစ်သတ်ခြင်း၊
မတရားဖမ်းဆီးမူ တရားဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်မှန်သမျှကို ဆန့်ကျင် တွန်းလှန်ကြကာ ၊
မိမိတို့ပြည်သူများ၏ ဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော ပြည်သူ့အာဏာ ပြည်သူ့အရွေးချယ်ခံပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များအစုအဖွဲ့ဆီသို့ အမြန်ဆုံးပြန်လည်ရောက်ရှိ ရယူနိုင်
ပါစေကြောင်း ရေးသား နိူးဆော်လိုက်ပါတယ်၊
ဖြောင့်မတ် မှန်ကန်သော ၊
တရားဥပဒေ စိုးမိုးသော ၊
ဒီမိုကရေစီရှင်သန် ခိုင်မြဲရေးအတွက် ၊
ယုံကြည်စွာဖြင့် . ကိုသိန်းဌေး ပဲခူး ၊